Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Avy amin'ny Super Fun Hot Spot ka hatramin'ny rindrina fiarovana sy fisafoana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Walking Street any Pattaya - sary natolotr'i Pattaya Mail
Ny rivo-piainana mahatsiravina sy foana ao amin'ny arabe malaza indrindra any Pattaya dia notapahina tamin'ny alàlan'ny fivarotana fivarotana telo mbola misokatra ihany: fivarotana fivarotana tokana Family Mart ary fivarotam-panafody kely izay toa samy manome fahafaham-po ireo mponina vitsivitsy mbola eo an-toerana, ary fivarotana akanjo Japoney miandry am-paharetana mba hisosa ny fotoana tsara.
Tamin'ny volana lasa teo, dia nianjera tamin'ny afo ny trano fandihizana Nashaa ary miafina ao ambadiky ny fefy fiarovana vy tena avo izy izao.
Noho ny antony azo antoka, trano maro hafa ao amin'ilay faritra no rakotra metaly mitovy amin'ny metatra Walking malaza.
Ny mpiambina dia nitombo avo telo heny taorian'ny tranga na dia tsy misy mpanjifa aza izao.
The iharan'ny afo tamin'ny volana lasa teo, Klioban'i Nashaa any Pattaya, Thailandy, izao dia arovan'ny fefy fiarovana avo be izay misy vavahady kely sy kely. Ny fanovana lehibe ny Walking Street dia avy amin'ny toerana tena mahafinaritra mankamin'ny tanàna matoatoa, miaraka amin'ireo tranobe maro hafa rakotra rakotra vy mitovy amin'izany noho ny antony azo antoka.
Amin'ny faritra iray kilometatra iray dia nitombo avo telo heny ny isan'ny mpiambina voakarama tsy miankina. Ny fisotroana taloha dia nanapaka ny saram-piarovany tamin'ny alàlan'ny alika rojo tezitra fa tsy manampy ny fampitahorana azy manokana amin'ilay fampandrenesana amin'ny fiteny roa izay manome baiko ny mpandalo tsy hiditra amin'ny toe-javatra mety hitranga. Rehefa tsy mandrahona olona ny alika dia mijanona an-tsehatra amin'ny tsihy manao hoe "Tongasoa."
Nahazoana lalana avy amin'i Pattaya Mail
Mpiambina iray teo akaiky teo Andriamatoa Katee no nilaza hoe: “Nampivadi-po ny rehetra ny afo Nashaa. Na dia tsy misy mpanjifa aza ankehitriny, dia mbola be ny vola mifatotra amin'ireo trano taloha ireo. ” Heveriny fa miandry ny karama ny tompony sy ny mpanofa azy ho fiomanana amin'ny fandravana ambongadiny.
Tsy ny rehetra no manaiky. Ny mpiady keyboard sasany eto an-toerana dia mieritreritra fa fotoana kely fotsiny alohan'ny raharaham-barotra toy ny mahazatra ny fiverenan'ny areti-mandringana ary mihodina indray ny fotoana mahafinaritra. Tokony handehandeha any ry zareo alohan'ny hatokisany loatra. Ny lapan'ny tanàna, amin'ny lafiny iray, dia azo antoka fa manohana fiovana lehibe ho avy. Tsy misy fahazoan-dàlana hiasa amin'ny orinasa mifandraika amin'ny alikaola amin'ny 2022, raha ireo trano amoron-dranomasina miampita amin'ny rano kosa dia kasaina handrava. Ny orinasam-paritany misahana ny herinaratra dia mandevina ireo tariby overhead ao amin'ny Walking Street, fa ny hevitra ankapobeny dia ny miomana amin'ny faritra fialamboly sy raharaham-barotra fa tsy fialofana ho an'ireo mpandihy poloney.
Ny Corridor ara-toekarena atsinanana, kaontenera manankarena orinasan-daza sy vahiny manana ny lazany no anton-javatra mamaritra. Ny EEC dia efa namatsy tetikasa maro eo an-toerana - ny làlambe, ny fanatsarana ny seranan-tsambo Bali Hai, ny fanamboarana ny morontsiraka Jomtien ary ny Pattaya, ary ny lalamby haingam-pandeha mampitohy ny faritra amin'i Bangkok - ary vitsy ny miahiahy fa hihetsika tsy ho ela amin'ny Walking Street io. Rehefa mifindra ihany ireo bulldozers dia misy lalana hafa tanteraka hipoitra avy amin'ny lavenona.
Na ahoana na ahoana, ny fefy vy mifono vy sy ny tariby misy tadiny dia tsy ho hitan'olona. Ny mpitsidika ny klioba ihany no mpitsidika ny klioba ankehitriny.
Tourism Seychelles in Spain’s New Edition of the Dive Travel Show Novambra 30, 2021